Iiholide zoLwandle lweBaltic kwi-Old Milk House / Strandgut
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDounia & Chadia
I-Alte Melkhaus ibekwe kwi-Schwansen Peninsula, ngaphandle kancinane kwe-Kleinwaabs ngombono phezu kwamabala athambekele kancinane ukuya kuLwandle lweBaltic. Sinamagumbi amathathu eeholide anikezelwe ngothando-amanye anembono entle ye-Eckernförde Bay- kunye nepropathi enkulu, ehonjiswe kakuhle enendawo eninzi yokubonelela abantwana ngojingi, i-sandpit kunye netrampoline. Ikwakulungele ukuchitha iholide yakho nabahlobo / iintsapho ezininzi.
Igumbi leholide laseStrandgut elilungele usapho libonelela ngendawo yokuhlala epholileyo yekhitshi kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu kumgangatho ophantsi. Indawo yokuhlala inebhedi yesofa ekhululekile, iTV yesathelayithi kunye nendawo yomlilo. Kwindawo yekhitshi ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kakhulu elinesitovu sombane, i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya, umenzi wekofu, iketile kunye neCD / unomathotholo kunye netafile yokutyela. Isitebhisi sokhuni sikhokelela kumgangatho wesibini, onika indawo eyaneleyo yabantu abane kunye negumbi lokulala elineebhedi ezimbini kunye negumbi lokulala elineebhedi ezimbini ezingatshatanga. Umtsalane wokuqala we-granary usenokuthi uvakalelwe apha ngokubonga kumgangatho wokuqala weplanga, indawo evulekileyo yeeplanga kunye nokuphakama kwesilingi esincitshisiweyo. Izitebhisi zikhuselekile phezulu kunye nesango lesitebhisi kwaye ngokucela sinokubonelela ngebhedi yokuhamba kunye nesihlalo esiphezulu. Yonwabela (kwakhona ukusuka kwithafa) umbono ongathintelwanga ukuya empuma phezu kwamasimi ukuya kuLwandle lweBaltic.
I-Schwansen Peninsula kumntla we-Schleswig-Holstein yenziwe yiSchlei kunye ne-Eckernförde Bay. Umhlaba oqengqelekayo ngobunono onamalwandle amaninzi endalo kunye namawa yiparadesi yokwenyani yendalo. Iiyadi ezininzi, iinqaba kunye neendawo zokuhlala zibumba imbonakalo yomhlaba. Ulwandle lweBaltic lubonelela ngolwandle olukhulu lwendalo, olunesanti kunye namatye oluqala e-Eckernförde kwaye lunwenwele phezu kweWaabs ukuya kumlomo weslime. Imekobume ifanelekile ukukhwela intaba okanye ukukhwela ibhayisekile, ukuhamba ngesikhephe, ukukhwela, ukuqubha, ngokulula: ukuphumla ngeyona ndlela ingcono. Uhambo oluya e-Eckernförde, eSchleswig / ilifa lenkcubeko yehlabathi iHaithabu, iKappeln kunye neFlensburg zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokujikela kuLwandle oluMntla ukuya eSt. Peter Ording luhambo olumnandi losuku olunomgama wama-90 km.
Umbuki zindwendwe ngu- Dounia & Chadia
Sihlala kwindlu enkulu kwipropati kwaye siyavuya ukuphendula nayiphi na imibuzo.
UDounia & Chadia yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Waabs